यस्ता श्रीमती जसले श्रीमानलाई कहिल्यै प्रगती गर्न दिनैनन् ! – Sandesh munch
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष १८, २०७७ समय: ७:४०:५८
श्रीमानलाई नराम्रो शब्द प्रयाेग गर्ने, हेपेर बोल्ने, गर्न लागेकाे काम हुदैन् भन्ने महिलाले कहिल्लै श्रीमानलाई प्रगती गर्न दिदैनन् । श्रीमानहरु परिवारको लागि मर्न तयार हुन्छन् । आफ्नो श्रीमानलाइ जतिबेला पनि नराम्रो शब्द बोल्ने ‘हेपेर’ बोल्ने ‘चिच्याएर’ बोल्ने महिलाले कहिल्लै पनि आफ्नो पुरुषको भलो हुन दिदैनन !
श्रीमान र श्रीमतीबीच सामान्य ठाकठुक पर्नु दाम्पत्य सम्वन्धकै एउटा हिंस्सा हो । तर, जतिबेला पनि नराम्रो शब्द बोल्ने ‘हेपेर’ बोल्ने ‘चिच्याएर’ बोल्ने महिलाले कहिल्लै पनि आफ्नो श्रीमानले प्रगती गरेकाे देख्न सक्दैन् !
यसको मतलब सामान्य झग’डा गर्नै हुदैन भन्ने होइन श्रीमन श्रीमती भएपछि सामान्य ठाकठुक त भइ नै हाल्छ । सम्बन्धलाई दिगो र रमाइलो बनाउने हो भने मनमा तुष पालेर बस्नु पनि हुँदैन । मनको कुरा आफ्नो जोडीसँग पोखिहाल्नुपर्छ ।
यदि तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग खुल्ला दिमागले राम्रोसँग बोल्न सक्नुभयो भने सम्बन्धमा प्रगाढता आँउछ । तर अनावश्यक ‘किचकिच’ गर्नु हुदैन । तर कहिलेकाहीँ हुने स-साना झग’डापछि तपाईंलाई आफ्नो गल्तीको महसुस हुन्छ र यसले तपाईं आफ्नो प्रेमलाई अर्को तहमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ ।